XOG:-Ethiopia & Jabuuti oo ku fashilmay Saldhiga Imaaradka ka dhisanayo Barbara | Kobciye24.com
XOG:-Ethiopia & Jabuuti oo ku fashilmay Saldhiga Imaaradka ka dhisanayo Barbara
Dhaq dhaqaaqyada dhismaha saldhiga military ee dowladda Imaaradka Carabta ka dhisanayso magaalada Barbera ee Somaliland ayaa si weyn waxa ay u caro galisay Dowladaha Jabuuti iyo Ethiopia,waxana Imaradka ay saldhigaan ku doonaysa balaarinta howlgalkeedi ka dhanka ah Xuutiyiinta Yemen.
Warbixino sir ah oo ay heleen warbaahinta carabta ayaa muujisay in Ethiopia iyo Jabuti ay isku dayeen inay is hortaag ku sameeyaan saldhigaasi inta aysan meel marin Barlamanka Somaliland,Sida warbixinada sirta ah ay sheegayaan Ethiopia ayaa ku fashilantay cadaadis ay saartay Barlamaanka Somaliland inuusan meel marin heeshiska Imaradka,sidoo kale Jabuuti ayaa sameeysay isku day midkaasi lamid ah balse waji gabax kala kulantay maamulka Madaxweyne Siilaanyo.
Dowladda Jabuuti ayaa ka dalbatay Sacad Cali wasiirka arimaha dibada Somaliland in aysan meel marin Barlamankoodi heshiiskaasi u dhaxeeyay iyaga iyo Imaaradka.
Waqti hore madaxweynaha Somalia Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa qaadacay heshiiskaasi waxana uu ugu hanjabay inay dacwad uga gudbin doonan QM maxaa yeelay waxaa lagu soo xadgudbay madax banaanidii Soomaaliya sida lagu xusay warbixinadaan sirta ah ay heleen warbaahinta Carabta.
Mucaradnimada ay sameyn rabeen dowladaha Ethiopia iyo Jabuti waxaa ku xoojinaysay Dowladda Sacuudiga oo diidaneyd in Imaaradka uu saldhig Military Somalia ka furto.
Waxaa xusid mudan in Sacuudiga uu ka baqayo in Masar oo xulufo dhow ay yihiin Imaaradka ay handado danaheeda dhinaca gobolka gaar ahaan isku dayga ay Ethiopia ay ku dooneyso biyo xiren ay ku sameyso wabegi Niil.
Soomaaliya ayaa hadda dhexda ka taagan hardanka u dhaxeeya Dowladaha Khaliijka oo dowladaha dariska ku ilaashanaya danahooda dhinaca amaanka.